बीस-बीसले ल्याएको सन्त्रास-CRI
बीस-बीसले ल्याएको सन्त्रास
सन् २०२० लाई मानव इतिहासमा महाव्याधिको वर्षको रूपमा सम्झना गरिने छ। विश्वभरि हालसम्म यो कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) बाट सङ्क्रमित हुनेको संख्या ८ करोड १३ लाख नाघिसकेको छ। मानव आँखाबाट प्रत्यक्ष देख्न नसकिने यो अदृश्य राक्षसबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि १७ लाख बढी पुगिसकेको छ। अहिले फेरि यसको नयाँ रूप देखिएको भनिँदै छ। यो हिसाबले यस कोभिड-१९ को कहरको अन्त्य अझै देखिँदैन। विश्वभरिका मानिसमा यसविरूद्धको प्रभावकारी खोप नपाएसम्म भय रहने नै देखिन्छ। सन् २०२० ले एउटा अदृश्य र भयंकर भय बोकेर आएको थियो। हुन त त्यो सन्त्रास अझै पनि छ तर सुरूका दिनमा मनभित्र गजबको सुनामी चलेको थियो।
सन् २०२० को जनवरी २५ तारिखबाट चिनियाँहरूको नयाँ वर्ष आरम्भ हुँदै थियो। यूनिभर्सिटी तथा स्कुलहरू बन्द भइसकेका थिए। आमचिनियाँहरू आफ्नो परम्परागत नयाँ वर्ष र वसन्त चाड मनाउने जोरजाममा थिए, कतिपय त आफ्नो मूल घर फर्किसकेका पनि थिए। त्यसै गरी धेरै चिनियाँहरूले देश भित्र तथा बाहिर पर्यटनका लागि तयारी गरिसकेका थिए, केही देश बाहिर भ्रमणमा निस्किसकेका पनि थिए। यसैको तामाझाममा नै थिए, सायद सबै।
पछिल्लो समय चिनियाँहरूले नयाँ वर्षको दिन पारिवारिक मिलन र भेटघाटपछि विशेषत देशभित्र र बाहिर पर्यटन गर्ने चलन ह्वात्तै बढेको छ। हामी (तीन जनाको परिवार) पनि चिनियाँको सिको गर्दै र छोरीलाई असाध्यै मनपर्ने बिटिएस समूहको मुलुक, केपपको राजधानी र आमनेपालीबाट रेमिट्यान्स भित्रिने मुलुकमध्येको एक दक्षिण कोरियाको पर्यटनको तयारीमा थियौँ।
सबै कुरा योजनाबद्ध रूपमा चलिरहेकै थियो, पृथ्वी आफ्नो कक्षमा रहेर सूर्यको परिक्रमा गरिरहेकै थियो। तर अचानक जनवरी २३ तारिख मलाई मेरो अफिस (चिनियाँ अन्तरराष्ट्रिय रेडियो) मा चिनियाँ सहकर्मी कूछनसी (नेपाली नाम राधिका)ले बाहिर जाँदा मास्क लगाउनुस् भन्दै केही मास्क थमाइदिइन्। म आश्चर्यित भएँ।
मलाई सम्झना छ, चिसो सिरेटोसँगै आकाश नीलो नै थियो, त्यो दिन। मास्क हातमा थमाउँदै गर्दा झ्यालतिर पनि हेरेँको थिएँ। मोबाइलमा पनि आगामी दिनमा वायु प्रदूषणको कुनै सङ्केत र चेतावनी दिइएको थिएन। त्यही पल नै हो, मैले पहिलो पल्ट यो रोगको बारेमा केही सुनेको। ऊहानबाट बेइजिङ आएका केही व्यक्तिमा सरूवा रोग देखिएको छ, अलि सतर्क रहनु होला, यसै भनेकी थिइन्। साथै भोलि २४ तारिखदेखि वसन्त चाडको लामो विदा थियो र छूनच्ये ख्वाइल (वसन्त चाडको शुभकामना) भनी शुभकामना साटासाट पनि गर्यौं।
त्यो दिन, त्यो साँझ सतर्कता अपनाउनु भनिए तापनि हामीले बजार जाँदा मास्क लगाउनुपर्छ भन्नेबाहेक बढी सोचेनौं। अफिसपछि साँझमा सदा झैं हामी दुई बुढाबुढी टहल्न पार्कतिर लाग्यौं। बाटोमा मास्क लगाएका बटुवाहरू फाटफुट देखिएका थिए। पार्कमा कम थिए मानिस तर सबैले मुख छोपेको नै पाइएको थियो। त्यो दृश्यले मनलाई एक पटक सोच्न बाध्य नबनाएको पनि होइन। तर वसन्त चाडको तामझामका कारण मानिस थोरै देखिएको भन्दै हामी पार्कको फन्को मारेर फर्केका थियौं।
यो रोग के हो ? घर फर्केपछि यस निमोनियाजस्तै रोग र ऊहानबारे समाचारहरू पढ्न थालें। जनवरी २३ तारिख बिहान ११ बजेसम्म बेइजिङमा १४ जना र चीनभरि विभिन्न प्रान्त, शहर र क्षेत्रमा फैलिँदै ५७१ जना बिरामी र १७ जनाको मृत्यु समेत भइसकेको थियो। साथै थाइल्याण्डमा ४ र दक्षिण कोरिया, अमेरिका र जापानमा पनि १/१ जना सङ्‍क्रमित भेटिएका रहेछन्।
एक करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको ऊहानलाई २३ जनवरी बिहिबार बिहान दश बजेदेखि नै स्थानीय सरकारले शहरको सार्वजनिक यातायातका साथै विमानस्थल र रेलवे स्टेशन समेत पूर्ण रूपमा बन्द गरी शहरलाई लकडाउन गरिसकेको थियो। २२ तारिख नै ऊहानवासीलाई अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन तथा सार्वजनिक स्थानहरू तथा सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन उर्दी जारी गरिसकेको थियो।
अनलाइनमा यी समाचारहरू पढ्दैजाँदा बिस्तारै मनमा डरले डेरा जमाउँदै गइरहेको थियो। तातो हाँडीभित्र मकै उफ्रिएजसो भएको थियो। हुपै प्रान्तको सदरमुकाम शहर ऊहानमा डिसम्बर ३१ मा पहिलो पल्ट यस भाइरस सङ्क्रमित भेट्टाइएको थियो। यस भाइरसको प्रकृति कोरोनाभाइरस जस्तै देखिएकोले नयाँ कोरोनाभाइरस भनिएको रहेछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले फेब्रअरीमा यस रोगलाई कोरोनाभाइरस रोग २०१९ (कोभिड-१९) नामाकरण गरेको हो।
त्यस बेला, यो एक किसिमको निमोनिया र सार्स जति प्राणघातक नभएको तर समयमै उपचार हुन नसके मृत्युसम्म हुने विज्ञको भनाइ थियो। साथै ३० जना सङ्‍क्रमितको उपचारपश्चात् निको समेत भइसकेको थियो। भाइरस हन्टरहरूले यो भाइरस सर्प, चमेरोको कारण मानिसमा सरेको अनुमान गरेका रहेछन्‍।
यस रोगका लक्षणहरू घाँटी सुख्खा भइ खसखस हुने, सांस फेर्न गाह्रो हुने र ज्वरो बढ्ने हुन्। (पछि उक्त रोगको लक्षण १ देखि १४ दिनभित्र देखिने बताइयो, कसैकसैमा २१ दिनमा पनि देखियो र कतिपयमा यस भाइरस रहेर पनि असर नगर्ने तर त्यस्ता साइलेन्ट क्यारियरबाट रोग प्रतिक्षमता कमजोर भएकाहरूलाई सङ्क्रमित पार्ने खतरनाक विशेषता पनि रहेछ। सङ्क्रमणको विस्तार दर मात्रै होइन यो विशेषताले पनि यसलाई निमिट्यान्न पार्न मुश्किल भएको छ।)
मोबाइलमा विभिन्न सञ्चार संस्थाका चिनियाँ, अङ्ग्रेजी नोटिफिकेशन्सप्रति पनि ध्यान दिन थालें। टिभी पनि खुलै राखेँ। यसै भाइरससम्बन्धि समाचारले नै व्यापकता पाएको थियो। यसै बीच नेपाली दूतावासले पनि विच्याटमार्फत् चीनमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गर्दै सूचना जारी गर्‍यो।
चीन सरकारले पनि भाइरसको तीव्र सङ्क्रमणको प्रबल सम्भावनाका कारण समस्त देशवासीलाई वसन्त चाडको अवसरमा भिडभाडबाट टाढा रहन र सकेसम्म यात्रा नगर्न सूचना जारी गर्यो। लगत्तै विश्व प्रसिद्ध फरबिडन सिटी, बेइजिङ चिडियाखाना, ग्रेटवाललगायत विविध सङ्ग्रहालय र पर्यटकीय स्थलहरूका साथै हरेक वर्ष आयोजना हुने टेम्पल फेयर नहुने सूचना जारी गरियो। (अघिल्लो वर्ष बेइजिङका यस्ता पार्क, सङ्ग्रहालय र विविध पर्यटकीय स्थलहरूले सात दिनको विदामा २३ लाख भन्दा बढी पर्यटकहरू भित्रिएका थिए।)
सात दिन वसन्त चाडको विदा थियो। तर मनमा चैन थिएन। यो रोग ऊहान र हुपै हुँदै फैलिँदै गएको भान हुन थाल्यो। यी समाचार तथा लेखहरू पढ्दापढ्दै धेरै पटक सांस फेर्न गाह्रो भएको अनुभूति पनि भयो। मन सशंकित हुँदै गइरहेको थियो। केही दिनअघि मात्रै हामी चीन र राजधानी शहर बेइजिङ विश्वमा नै सबैभन्दा सुरक्षित भनेर गफ्फिएका थियौं। सन् २०३० सम्ममा चीनले अकल्पनीय प्रगति गरिसक्ने कक्षा आठमा पढिरहेकी छोरीले बताएकी पनि थिइन्।
रात छिपिँदै थियो, हामी सबैको अनुहारमा डर लुकेको थियो। जनवरी २३ तारिख रातिसम्म बेइजिङमा ३४ जना गरी चीनभरि ८३० जना सङ्‍क्रमित र २५ सङ्‍क्रमितको मृत्यु भइसकेको थियो। ‘साह्रो टेन्शन पो भयो, मलाई।’ मनमा अनेकन् कुरा खेलिरहेको बेला श्रीमतीले भनिन्। ‘हामी विदेशीदेखि सबैलाई सुरक्षित भनेको यो ठाउँमा के आइलाग्यो। ठ्याक्कै नयाँ वर्ष पारेर, कतै यो चाल त होइन, चीनको प्रगतिमा आँखा गाड्नेहरूको ?’ खोइ के हो? के हो? उत्तरबिहिन र सशंकित धेरै भएका थियौं। (हाल यो भाइरस मानव सिर्जित नभएको तथा यसको स्रोत ऊहान नभएको विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाहरूको अनुसन्धानले पुष्टी गरिसकेको छ।)
जनवरी २३ बिहिबारको साँझसम्म त पार्कमा टहलेका थियौं तर शुक्रबार (घडीले २४ तारिख देखाइसकेको थियो) देखि बाहिर जान हुने कि नहुने अन्योलमा थियौं। हुन त हामीले वसन्त चाड नजिकिएसँगै हप्ता दिनका लागि खाद्य सामग्रीको जोहो केही दिन अगाडि नै गरिसकेका थियौं। अब के त बाहिर जान नहुने? के हावामा पनि भाइरस हुन्छ? सार्सको भाइरसजस्तै स्टिल, फलाम, प्लास्टिकलगायतका विविध सामानहरूमा कति दिनसम्म रहने हो? यस्तै यस्तै प्रश्नहरू तेर्सिरह्यो। यस्तै यस्तै सपनामा पनि बरबराइयो।
बिहिबारको दिन मनमा डरको आँधी चलेको थियो भने शुक्रबार त्यसपछिको शुन्यता। ऊहानबाट झण्डै १२०० किलोमिटर टाढाको बेइजिङमा केही हुने छैन भन्दै ढाडस दिँदै थियो, मन।
चिनियाँ नववर्षको पूर्वसन्ध्याको दिननै ऊहानमा दश दिनमा हजार शैय्याको अस्पताल सञ्चालनमा आउने गरी कार्य आरम्भ भएको थियो। ऊहानसँगै आमचिनियाँले मुसा वर्ष खुशीपूर्वक मनाउन सकेनन्। भाइरस आतंकले वसन्त चाड र नयाँ वर्ष खल्लो र निरश बन्नपुग्यो। (उहानपछि हुपै प्रान्त र चीनका विभिन्न शहर तथा प्रान्तसँगसँगै बेइजिङले पनि शनिबार २५ तारिख सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि पहिलो स्तरको सङ्कटकाल घोषणा गरेको थियो। जनवरी ३० तारिख, विश्व स्वास्थ्य संगठनले चीनबाहेक अन्य १८ मुलुकमा पनि कोरोना भाइरस फैलिएपछि "विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्कटकाल" घोषणा गर्यो।)
आज चीनले यस भाइरसमाथि जित हासिल गरिसकेको छ। भाइरसको केन्द्रबिन्दु मानिएको ऊहान पनि अप्रिल ८ बाट पूर्वस्थिति रूपमा फर्किसकेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, चीनमा ८७ हजार सङ्क्रमितमा ८२ हजार बढीको सफल उपचार र ४६ सय ३४को मृत्यु भएको छ।
विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको यस भाइरसमाथि चीनले सहजै विजय पाएको होइन। एक अर्ब चालिस करोड चिनियाँ जनताको साथ र नेतृत्ववर्गको दूरदर्शिताले सम्भव भएको हो। चिनियाँले २०२० मा आफ्नो परम्परागत नयाँ वर्ष मनाउन पाएनन्। आशा गरौं, यस पटक भने बिना सन्त्रास खुशीका साथ मनाउन पाउने छन्। तापनि सचेत र सतर्क रहन आग्रह गर्दै चीनले यस पटकको चाड र विदामा पनि भिडभाड नगर्न तथा बाह्य भ्रमण नगर्न आग्रह गरेको छ।
सन् २०२१ मा सम्पूर्ण विश्वले प्रभावकारी खोप रूपी अस्त्र होस् या अरू कुनै उपायबाट यस कोभिड-१९ माथि जित हासिल गर्न सकुन्, यही छ शुभकामना !
(सर्वप्रथम इकागजमा पुस १६, २०७७ मा प्रकाशित)